Doorashada Hindiya 2019-ka: Siyaasadda Hindiya maxay u dhaafi la'dahay Nehru? - BBC News Somali
Doorashada Hindiya 2019-ka: Siyaasadda Hindiya maxay u dhaafi la'dahay Nehru?
Image caption Madaxweyne ku xigeenki hore ee Hindiya xilligi xorriyadda Pandit Jawaharlal NEHRU
Dalka Hindiya ayaa wuxuu dhawaan gudagalayaa doorasha guud iyada oo ay codbixintu dhaceyso 11-ka bisha April, BBC waxay maalin walba idin soo gudbisaa xogihi ugu dambeeyey ee Doorashada Hindiya la xidhiidha.
Wararki ugu dambeeyey ololaha doorashada
Madaxa Congreska ahna diblomaasi horay uga soo shaqeeyey qaramada midoobay Shashi Tharor ayaa eedeymo u soo jeediyey xisbiga talada dalkaasi haya ee Bharatiya Janata Party (BJP) Ra'isal wasaarihi ugu horreeyey ee Hindiya inuu sababay Shiinaha inuu hakiyo heshiiska afaraad koox fadhigeedu yahay Paakistaanna looga yeero argagixso.
Xisbiga BJP ayaa jawaab ka bixiyey jeesjeeska madaxa congreska Rahul Handhi uu ku sheegay ra'isal waraaha dalka "mid daciif ah" isaga oo weliba raaciyey heshiisyada shiinaha iyo Hindiya iney ka mid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka helo kursiga joogtada ah.
Balse Mr Tharoor wuxuu ku baaqay iney kala duwanaashaha sii socoto.
Xuquuqda Sawirka @ShashiTharoor @ShashiTharoor
Maxay arrintan saameyn u leedahay?
Nehru ayaa wuxuu yahay mid ay hadal hayntiisu ka daalin siyaasiyiinta xisbiga talada haya ee BJP. Nehru waxaa lagu dhaleeceeyaa arrima badan oo ay ka mid yihiin inuu aasaaso qaranka Pakistaan isla-markaana la isku qabsado gobolka Kashmiir ee ay labada dal sheeganayaan.
Waxaana sida oo kale jira arrima badan oo quseeya qoyska Nehru oo iska daba wareeg ku abuurtay siyaasadda dalka Hindiya.
Guddoomiyaha koongiraska oo farac toos ku leh qoyska Nehru iyada oo Mr Tharoor uu xisbiga BJP uu ku sheegay inuu xaqiiqooyinka jira uu iska indha tiraya.
Ninkani magac weyn kuma lahayn Congreska, balse Mr Vadakkan wuxuu weli congreska ka yahay muhiim. Waxaana lagu yaqaannaa guddoomiyaha xisbigi hore ee Sonia Gandi isaga marna ahaa afhayeenka warbaahinta dalka.
Image caption Ravi Shankar iyo Tom Vadakkan
Wargeyska Indian Express wuxuu daabacay, bishi hore oo keli ah iney 28 xisbi oo mucaarad ah hoggaamiyaashooda ay ku biireen xisbiga talada haya.
Arrintan ayaa waxay imaneysaa xilli la isku hayo kuraasta gobolka Uttar Paradesh oo ay ka soo baxeyso 80 xildhibaan. Waxaana gobolkaasi doorashadi 2014-kii dhacday guul aad u weyn ka soo hoyey xisbiga talada dalka haya ee BJP, balse doorashadan waxay noqon doontaa mid ku adag haddii uusan xisbiyada mucaaradka qaarkood BJP uu isbahaysi la sameyn.
Codsiga Mr Modi uu u soo jeedinaya taageerayaashiisa ayaa waxay tahay iney markale fursad u siiyaan inuu dalka uu hoggaamiyo si uu dalka Hindiya "tubta hormarka ee saxda ah" uu u mariyo si ay caalamka saameyn ugu yeelato.
Siddeed ruux oo ku dhimatay isku dhacyo ka dhashay doorashada Kashmir
Laga soo billaabo 2014-kii guulaha dhinaca dibloomaasiyadda uu gaaro dalka Hindiya waxaa loo nisbeeynayey isaga. Waxayna sumcaddiisa si aad ah u sii koradhay xiisaddi toddobaadyadi u dambeeyey ay Delhi la lahayd Pakistan. Isaga oo olalihiisa doorashada halqabsi uga dhigtay "Modi oo Pakistaan cashar u dhigaya".
Shaqa la'aanta ka jirta dalka Hindiya ayaa ah arrinta ugu muhiimsan ee si weyn vlooga hadal hayo doorashada sanadkan 2019-ka dalkaasi ka dhaceysa .
Image caption Dad shaqa doon ah oo shahaadooyinkooda sita
Warbixin ku saabsan shaqa la'aanta dalka Hindiya oo sanadkan la soo saaray, ayaa tilmaameysa iney gaartay heerkii ugu sarreysay tani iyo 1970-yadii.
Sidaa darteed dad badan oo codkooda doorashada ka dhiibanaya waxa ugu horreeya oo ay codkooda ku dhiiban karaan ayaa waxay tahay haddii uu jiro xisbi siyaasadeed oo u sahlaya iney shaqa helaan.
Ra'isal wasaare Narendra Modi, wuxuu ololahiisa doorashada uu halku dhig uga dhigay 'waxaan abuureynaa fursado shaqo oo aad u badan', balse ballantan waxay ahayd mid xilliga oloha doorashada uu waday 2013-ki uu xisbiga BJP ballan qaaday balse aan fulin taasoo laga yaabo iney saameyn weyn u geysato xisbiga talada haya.
Modi Hindiya: Ma laga yaabaa Modi inuu ku guul darreysto shaqa abuurka
Priyanka Gandhi ayaa boggiisa Tweetarka laba farriimood ku soo qoraty saacada gudahood, waxayna khudabaddeedi ugu horreysay ka soo jeedisay gobolka Mr Modi uu ka soo jeedo ee Gujiraat.
"Codkaaga waa hubkaaga, baraaruggana waa hubkiinna, wacyigaagana waa hubkaaga, sababta oo ah waxaad dooraneysaa waa mustaqbalkaaga" ayey ka tiri isku soo bax ka dhacay gobolka Gujiraat iyada oo khudabaddeedana aad loola dhacay si ka duwan ayeydeed iyo ra'isal wasaarihi hore.
Hardik Patel oo taageera badan ka haysta bulshadiisa
Hardik Patel oo ah nin baraha bulshada si weyn uga ololeeya wuxuu cadaadis xooggan uu ku hayaa Ra'isal wasaare Modi gobolka Gujiraat uu ka soo jeedo isaga oo olola xooggan ka wado.
Mr Patel ayaa wuxuu madasha ololaha doorashada uu ka soo muuqday iyada oo ay wehliyaan Rahul Gandhi iyo Priyanka Gandhi oo dhammaantood gobolka Gujiraat khudbad u soo jeediyey dadki ololaha doorashada isugu soo baxay. Wuxuuna shaaca ka qaaday inuu maalinta Axadda ah uu si rasmi ah uu ugu biirayo xisbiga Rahul Gandhi.
Image caption Dad badan ayaa doorashada u arko afti loo qaadayo Narendra Modi
Haddaba wax ka ogoow Toddobo arrimood oo ku saabsan doorashada Hindiya
1. Dadkii ugu badnaa ee doorasha ka qeybgala
Doorashadan waxaa ka qeyb qaadanaya dadkii ugu badnaa adduunka ee doorasha ka qeybgala, illaa 900 milyan oo qof ayaa codkooda dhiibanaya , iyaga oo tagaya illaa hal milyan oo goobaha codka lagu dhiibto.
Image caption Rahul Gandhi oo ah hoggaamiyaha mucaaradka
Waxa ay tirada codbixiyeyaasha ka badantahay dadka ku nool qaaradda Yurub iyo Australia oo laisku daray.
Wax ka badan 8,250 musharax oo matalaya 464 xisbiayaa ka qeybgalay doorashadii 2014-kii.
2. Muddo dheer ayay qaadataa
Doorashan waxa ay qaadataa xilliga ugu dheer adduunka, waxa ay bilaabanaysaa 11-ka April, waxayna soo xirmaysaa 19-ka May.
Gobolada qaarkood ayaa doorashada u qabta marxalado kala duwan.
Sababta ugu weyn ee ay u daahdo ayaa ah sugista amniga, sababtoo ah ciidanka booliiska waxaa loo arkaa in ay yihiin kuwa dhinac u janjeera, sidaas darteed waxaa goobaha codbixinta la geeyaa ciidamada heerka federaalka ah.
3. Lacag aad u badan ayaa ku baxda
Waxaa ku baxda lacag aad u badan oo gaaraysa $5 bilyan doolar sannadkii 2014-kii oo ay dhacday doorashii ugu dambeysay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta daraasaadka warbaahinta.
Image caption Taageerayaasha Modi
4. Dumarka oo aad u tiro badan
Qiyaasaha laga hayo doorashadii dhacday 2014-kii, dumarka waxa ay codbixiyeyaasha ka ahaayeen 65.3% .
Markasta dadka usoo baxa in ay codeeyaan, waxaa aad ugu badan dumarka marka la barbar dhigo ragga.
Xisbiyada siyaasadda ayaa hadda bilaabay in ay dumarka il gaar ah u yeeshaan, una balanqaadaan waxqabad u gaar ah dumarka sida deymo yaryar oo ay ganacsiyo ku biloowdaan.
5. Narendra Modi ayaa muhiim ah
Waxa aqlabiyadda baarlamaanka dalkaas haysta xisbiga BJP iyo xisbiga xulufada la ah. BJP waxa uu ku guuleystay 282 kursi oo ka mid ah 428-da kursi ee uu baarlamaanka ka koobanyahay .
Ra'isulwasaare Narendra Modi ayaa ah qofka ugu muhiimsan ee indhaha lagu hayo maadaamaa doorashadii hore uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ebed.
Waa qofka ugu caansan Hindiya, isaga oo ah qofka ugu muhiimsan ee codadka u raadiya xisbiga.
Image caption Dad sawirka Modi afka u galinaya cunto macmacaan ah jacaylka ay u qabaan awgeed
Balse natiijada doorashadan ayaa la aaminsanyahay in ay tahay afti lagu ogaan karo heerka taageerada loo hayo Modi.
6. Kaalinta Lo'da ee doorashada
Lo'da ayaa astaan u noqotay kala qeybsanaanta bulshada Hindiya, taas oo ay xisbiyada ka faa'iideysanayaan.
Dadka Hindiiga ah ee lo'da caabuda ayaa dilay dad muslimiin ah oo lagu eedeeyay in ay lo' qasheen.
Image caption Lo'da oo Hindiya laga caabdudo
170 milyan qof oo Muslimiin ah ayaa ku nool Hindiya, iyada oo aysan jirin hal xildhibaan oo Muslim ah oo ku jira xisbiga talada haya ee BJP.
7. Gobolka hardanka ugu badan uu ka jiro
Gobolka Uttar Pradesh ayaa ah kan hardanka ugu badan uu ka jiro, sababtuna waxa ay tahay in xildhibaanada ugu badan laga soo doorto.
Illaa 80 xildhibaan ayaa gobolkan laga doortaa , waxaana ku nool qof ka mid ah lixdii qof ee reer Hindiya ah.
Image caption Siyaasiyiinta kala ah Mayawati iyo Akhilesh Yadav oo markii hore lid isku ahaa ayaa u midoobay BJP
Xisbiga BJP ayaa gobolkan ka heley heley 71 kursi, waxayna taas ku dhacday isbahaysi adag oo xisbiyada ka dhex dhashay.
Balse hadda waxaa BJP u midoobay labo xisbi oo saamayn badan ku leh gobolkan.